Common Video Radidiyaha Arrimaha
Waxaa mararka qaarkood waxay noqon doonaan qaar ka mid ah arrimaha video loo maqli karo marka aan isku dayno in ay geliyaan, daawan ama wax ka bedel ah file video qaarkood. Ha u ahaato arrimaha loo maqli caadi ku saabsan file video laftiisa ama ciyaaryahan video ah, dheeraad ah oo ku saabsan xaq u bartaan halkan. Sidoo kale waxaa jira xal lagu talinayaa in arrimaha ay khusayso.
Play kasta oo qaabab Video
Ku dar-socodka / koronto-tago
Noocyada caadiga ah ee Video Radidiyaha Arrimaha
Audio / Video-la xiriira
Bandhigay muuqaal ah oo keliya oo aan lahayn audio socda
Audio Kaliya soo laakiin aan muuqaal ah ama graphic
Visual oo maqal ah ma u hagaagsan inta lagu guda jiro loo maqli karo
Gurracan audio visual ama qodxo inta lagu guda jiro loo maqli karo
Xalka / s
Fiiri labada ciyaaryahan goobaha computer iyo video ee. Haddii ay jirto ma uu falin ka, ka eeg galay codec loo isticmaalo. Haddii ciyaaryahan video hadda weli ku guuldareysto inuu Radidiyaha video faylasha ka dib ah iyadana / fur-tago, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad ka fiirsan kale xal .
Connected disc adag / Drive aan la aqoonsan yahay
Cable USB / xiriir ogaanin
Video faylasha lagu kaydiyaa qalabka ma taageeray
Isku day adigoo isticmaalaya cable USB kale iyo in la hubiyo qalab aan la burburay. Ka dib markii in, u tag iyada oo qaabab file, taas oo vidoes ah ay ku kaydsan yihiin, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in ay qaabab file aqlka halkii. Ma taasi dhacdo, xalka ugu tooska ah waa in la badalo qaab aad file video.
Size file waa mid aad u weyn oo loogu talogalay loo maqli karo
Codec isticmaalay ku kaydiso video ama xogta audio ma taageersana
Ciyaaryahanka video hadda ma taageeri qaab faylka ama codec
Waxaad u bedeli karaan file video ah mid kale oo nooca format in ay la jaan aad ciyaaryahan video hadda. Haddii ay sabab u tahay codec ku leheyn, si fudud u dejisan iyo rakibi ku add-on / fur-in loo baahan yahay.
Ciyaaryahanka Video burburtay intii uu socday loo maqli karo
Disc waa jidh ahaan waxyeelo
Nidaamka Computer ee ku burburtay
Video file kaydiyaa disc kharribmay
Guuleysatey computer ka dib in la hubiyo in disc ee aan burburay ama ku kharribeen. Haddii disc ee physcially burburay, waxaad mar walba isku dayi kartaa in ay xalliyaan midkood isbedel ah ciyaaryahanka video, rakibi add-on / fur ku haboon ama beddelid files ka hor.
Aqbasho xaddidan iyo qaab wax soo saarka
Codec aan la taageeray
Ku guuldarraystay in la geliyo ama file video loo maqli karo
Player Ama nidaamka burburtay intii uu socday loo maqli karo
Download iyo rakibi dheeraad ah oo ku darayaa-socodka / fur-tago. Haddii kale, loogu badalo qaabka faylka iyo codec ka hor isku dayaya inay mar kale geliyaan faylasha video.
Fariin qalad ah oo ku saabsan codec ka aqlka
Visual ama arrimaha la xiriira audio
Fashilmay in ay si habsami leh Radidiyaha
Waxaa hubaal ah inay awoodaan inay Radidiyaha, laakiin aan cod ah
Fariin qalad ayaa tilmaamaya waxa codec maqan iyo waxa aad u baahan doontaa in aad soo dajiyo ku daro ah iyadana / surin-in si loo hubiyo in loo maqli karo guul. Sida ka duwan, beddelaan kaliya in video ciyaaryahan oo kala duwan ay leeyihiin oo taageerta codec ah.
Arrimaha Radidiyaha Common sida Players Video
Khadadka Horizontal inta lagu guda jiro loo maqli karo
Video hindisaa Negeria
Video tayada beddeli kara
Function Forward / lehna dib u celiya ee waa gaabis ah
AVI video files ku guuldareystay inuu Radidiyaha
Dib codec DivX ka hor badalay kaarka video
Download iyo rakibi Avidefreezer
Hoos xalinta khilaafka ama la yareeyo shaandeynta ee haddii ay MP4 ah
Dib u celi goobaha keyframe ah
Cadaadi ama badalo file AVI in ay qaab file kale
Video loo maqli u muuqda inuu la harjadaya
Video ku guuldareystay inuu Radidiyaha
Ku guuldarraystay in la Radidiyaha dhaqaaq tartiib ah
MOV video files ma ciyaari doono
Audio dhibaatooyin la xiriira
Shuttering ama qodxo audio
Beddel goobaha ciyaaryahan video ee ay u Safe Mode
Beddelaan file video ama rakibi codec ka maqan
Hagaaji in QuickTime 7 ama isku day kale oo
Download iyo rakibi codec ka maqan
Dheellitir size oo ka mid ah Buffers Sound
Isku day inaad video ciyaaryahan oo kala duwan
Error nooca file aqlka
Ma awoodo in uu wadaagaan videos in Facebook
Video / files audio ha furin
Error on download dhamaystirnayn
Baadi General DVD
Message weydiinaya si ay kor lagu jiro diinta
Download codec lagama maarmaanka ah ama badalo qaab video ah
Hubi in RealPlayer waa ciyaaryahan by default
Hagaaji aad video ciyaaryahan si version ugu dambeeyey
Dib DVD software aad
Hagaaji in version Plus ama isku day in doorasho oo kala duwan
Oo tayo leh loo maqli Poor on Qalabka telefoonada gacanta
Video tayadoodu liidato u iPad
Error on diinta files
Video rafaad iyo sida liidata ee qalabka ku xiran
Dib u celi goobaha video ah
Hubi in xidhiidhka iyo bandwith mid deggan
Isku day fikirtid, waxaadse video oo tayo leh Auto ama Tayada Standard
Kordhi meel disc ama isku day xal kale
Fiiri doorasho kala duwan oo ah ciyaaryahan video
Audio oo ka mid hagaagsan oo video
No audio, video kaliya
Error on DVD baadil Eebe (markaad DVD la geliyo)
Error on diinta guuldareystay
Tayada diinta Poor
Qayb video gooyay ka dib markii qaab beddelidda,
Barnaamijka shaqeeya inta lagu jiro diinta ka joojiyay
Hubi goobaha ama codec taageeray
Beddelaan aad file
Isku day inaad video kale ciyaaryahanka-socon DVD
Xir barnaamijyo kale oo sax ah NVIDIA CUDA icon
Kordhi xallinta, bitrate iyo koobin kale
Gacanta qabsato dhererka video ku galay mid ka mid sax ah
Untick sahlo DVD Navigator in converters DVD DVD-yada loogu talagalay
Error ku guuldareystay in la furo / ciyaari disc ah
Movies Blu-ray ku guuldareystay inuu Radidiyaha
Player Mar walba bidbidayaan
Error xogta ku kharribeen (ee disc Blu-ray ah)
Dhibaatada Sound, sawir cadda ama loo maqli unsmooth
Isku day ah video ciyaaryahan kale oo in ay la jaan qaada, waayo, Blu-Ray
Dib ciyaaryahan video ah oo la xiro codsiyada kale
Ilaa inuu jidh ahaan ka burburay, isku day inaad diinta faylasha
Hubi in ciyaaryahanka ku xiran shabakadda
Double-hubi gobolka ee loo maqli taageeray
Video iyo audio ka mid ah u hagaagsan (inta lagu guda jiro loo maqli HD)
Guuleysatey computer ama dib ciyaaryahanka
Dheellitir video iyo ciyaaryahan ee goobaha
DVD-yada ku guuldareystay inuu Radidiyaha
Videos aad u madow
Video loo maqli karo waa beddeli kara
Audio iyo video oo ka mid hagaagsan
Faylal uma shaqeeyo
Subtitles ma soo bandhigay
Dib ciyaaryahan video ama isku day in ciyaaryahan kale video
Kordhi ka gamma qiimaha ee Video tab
Jooji codsiyada kale ee socda
Isku day inaad ku rakibidda kale add-on / fur-in
Ku rakib codec loo baahan yahay ama badalo file video ah
Beddel faylasha Cinwaan Deji
Badhamada Action ma shaqayn doonto, inta lagu guda jiro loo maqli karo ee wmv video files
Player Casilay inta lagu guda jiro loo maqli karo ee files FLV
Ku guuldarraystay in la Radidiyaha files MP4 soo bixi YouTube
Ma hakan karaan faylasha Jabbuuti oo inta lagu guda jiro loo maqli karo
Download add-on dheeraadka / fur-in
Dhaqaaji video files rogtid oo aad buugga deegaanka
Hubi file video ah kuma jiraan ah ActionScript
Dhibaatada bandhigay Cinwaan
Xuduudaha Black inta lagu jiro hab screen-buuxa
No audio inta lagu guda jiro loo maqli karo
DVD loo maqli karo waa daalid
Dhibaatooyin video Audio u hagaagsan
Dib noocyada ah
Isku day inaad ku daray "XV -vo" inay line amarkii
Disable daemon farshaxanka
Sahlo DMA ee drive DVD ah
Dib u celi goobaha video ama isku day kale ciyaartoyda video
Video iyo audio ka mid ah nidaamka tareenka
Files MOV aan la aqoonsan yahay
Files badaley ma noqon karo loo maqli karo
Tayada files gediyay waa Faqiir
Baararka Black on gediyay videos
Dami anrivirus ama gab brannmur
Ku rakib codec lagama maarmaanka ah ama isticmaal video ciyaaryahan oo kala duwan
Ku rakib QuickTime ugu dambeeyey
Isku day in aad kala soo bixi baakada codec maqan
Dheellitir bitrate oo kale beegyada uu u video ee
Tafatir videos ama dib xallinta d
Audio oo keliya, ma video
Files AVI ma ciyaari doono
Codec ma taageersana
Ma awoodo in uu ku shuban files Cinwaan
Beddel goobaha wax soo saarka ee ciyaaryahan video ah
Dib software ama isku day kale oo ka soo baxay
Download pack codec ah
Ku dar files Cinwaan gal file video aad ka hor loo maqli karo
Ma awoodo in uu sii qulquli warbaahinta
Codec leheyn ama goobaha
Error on loo maqli karo uma wadi karin
Qalabka la ogaan
Hubi in aad xidhiidh iyo network
Ku rakib codec loo baahan yahay ama badalo qaab faylka
Isku day adigoo isticmaalaya video ciyaaryahan oo kala duwan
Hagaagsan iyo cusboonaysiiso helitaanka qalab deegaanka ama account Plex
Flash files ku guuldareystay inuu Radidiyaha
Error on qaab video
DVD ku guuldareystay inuu Radidiyaha
Download add-on loo baahan yahay / fur-in
Isku day adigoo isticmaalaya kale ciyaartoyda video
Dheellitir goobaha video ah
Hubi DVD la jir ahaan ma u burburay
Screenshot oo maqan
Taariikhqorihii aan shaqayn
Radidiyaha si joogto ah laga fariisiyo
Videos ku fashilantay in ay geliyaan
Waxay u ekaan ka soo doorashooyinkaaga maktabadda ee
Isku day xal kale
Double-hubi gobolka taageeray loo maqli karo
Cadaadi ama beddelid files ka hor
Mouse aan shaqayn si sax ah oo ku saabsan hab screen-buuxa
Heerarka jir Low
Arrimaha hagaagsan Audio
Loo maqli beddeli kara
Dheellitir goobaha ciyaaryahanka
Dib u celi dhalaalka shaashadda
Isku day inaad la qabsado labada ciyaaryahan video iyo goobaha nidaamka ee
Dib ciyaaryahan video ah
Waxba ma ahan wixii arrimo aad video loo maqli karo waa, in aad had iyo jeer wax ka badan hal xal si ay u saxaan. Xaqiiqo ahaan, mid ka mid ma jeclaan lahayd in aad hesho ka mid ah aagga raaxo haddii aysan si. Waxaa la mid ah marka ay timaado in caado ka isticmaalaya ah ciyaaryahanka video joogto ah. Haddii aad si fudud u soo bixi kartaa oo rakibi ah ku darto on / fur-in, markaas sababta aan marka hore in. Haddii aysan u xaliyaan arrinta, markaa weli ma aha goor danbe in ay isku dayaan video ciyaaryahan oo kala duwan. Haddii aad rabto in aad joojiyey dhammaan arrimaha this, waxay ku siin go kula talinayaa dhan-in-mid xal.
Ku rakib-socodka / koronto-tago
Talinayo All-in-Mid ka mid ah Software
Xulashada 1: Change Video Player
Inta badan ciyaartoyda video caan ah Mac
Haddii aadan heli karin wax ah iyadana / fur-tago haboon ama la jaan aad ciyaaryahan video hadda, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad eegno kale video ciyaartoyda ugu caansan in la heli karo si aad u Mac. Qaar ka mid ah fursadaha laga yaabaa fudud dheeraad ah oo toos ah, halka inta kale waxay leedahay waxyaalo dheeraad ah kaliya ku habboon laga yaabaa in aad video loo maqli karo doorashada.
Xulashada 2: Ku rakib-socodka / koronto-tago
Hagaajinta astaamaha video ciyaaryahan aad
Si aad u badbaadin kaaftoomi ee raadinaya, degsado iyo ku rakibidda video ciyaaryahan oo kala duwan, aad rabto in laga yaabo in ay isku dayaan iyo sii wanaajinta muuqaalada aad ciyaaryahan video hadda. Si fudud u leeyihiin caleenta degdeg ah iyada oo ka mid ah laga heli karo ah iyadana / fur-tago .
Xulashada 3: talinayo All-in-Mid ka mid ah Software
Video Converter Ultimate for Mac Waxay bixisaa xawaare ah diinta aalladda-degdeg ah. Marka laga reebo filaayo video goobaha, waxa kale oo ay taageero ah tiro balaadhan oo ah la gelin iyo wax soo saarka file qaabab .. On top of ay awoodaan in ay wax ka bedel aad video files, waxaad had iyo jeer kala soo bixi kartaa jecel aad online videos ka YouTube iyo abuuro DVDs kuu gaar ah.
File Waxaad gali kartaa ka buugga deegaanka ama kaliya muujiyo files looga baahan yahay inay jiidi-iyo-hoos u iyaga ku Video Converter Ultimate for Mac ah.
FIIRO GAAR AH : Haddii aad u baahan tahay si ay u qabtaan hawlo kale, fadlan hubi in aad tahay qof ku tab saxda ah; Guba (si ay u abuuraan DVD a) ama Download (si ay u soo bixi online videos).
Waa user-friendly interface aad sidii aad u baahan tahay oo dhan waa in ay doortaan qaab file saarka sida aad doonayso inaad ka presets ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad Radidiyaha videos ku saabsan telefoonka mobile, kiniin ama Console ciyaarta, waxa uu sidoo kale ka mid ahaa in ka Qalabka category.
FIIRO GAAR AH : Just riix Edit 's icon soo socda si file kasta video uploaded si ay u helaan screen tafatir ah. Waxaad ka codsan kartaa saamaynta kala duwan, qabsato koobin sida mugga, Nuurkii ama ka duwan iyo sidoo kale warqadda subtitles iyo watermarks.
Marka go'aan ku saabsan qaabka wax soo saarka, inaad sameyso oo dhan waa riix badalo button. U yeelan doontaa in ay la socdaan horumarka diinta iyo hesho fariin pop-up ah marka ay dhamaystaan ​​Waxaad. Ka dib markii in, in aad sidoo kale dib u soo ceshano kartaa badaley video files ama iyaga tranfer muuqan rogtid oo aad doorashada qalabka la qaadi karo.
FIIRO GAAR AH : Waxaad u baahan doontaa app Wondershare Player ee (si xor ah u dejisan iyo rakibi) ka hor inta ay awoodaan si ay u gudbiyaan faylasha.
Features dheeraad ah 1: Online Video Downloader
Video online ayaa lagala soo bixi waa la dhisay-in la Video Converter Ultimate for Mac ah. Si fudud u maraan si ay ugu Download tab korkiisa bilaabay software ah in aad nuqulka iyo paste URL video online ee download deg deg ah. Ka dib markii in, waxa kale oo aad dooran kartaa in loogu badalo faylka galay file maqal ah oo lagu wareejiyo qalabka la qaadi karo si aad u offline madadaalada.
Features dheeraad ah 2: DVD Creator iyo gubi
Haddii aad jeceshahay si ay u abuuraan DVDs kuu gaar ah, oo aad noqon doonaa ku faraxsan in ay soo shaqeeyey. Marka laga reebo inay awoodaan inay u shakhsiyeeyo DVD arrimo kuu gaar ah, waxa kale oo aad sameyn kartaa arrin saamiga, heerarka DVD iyo wax ka badan. Waxa kale oo suurtogal ah in la sii softcopy ah file video ee image file ISO ah.
> Resource > Video > Video Player ee Common Arrimaha